Soo noqoshada Yusur Abraar oo muujineyso hal arrin oo laga arko Farmaajo! - Caasimada Online
Home Warar Soo noqoshada Yusur Abraar oo muujineyso hal arrin oo laga arko Farmaajo!
Soo noqoshada Yusur Abraar oo muujineyso hal arrin oo laga arko Farmaajo!
Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa magaalada Muqdisho soo gaartay Yusur Abraar oo caan ka noqotay Soomaaliya markii ay qaaday tallaabo geesinimo leh oo ay kaga dhawaajisay inay ka tagtay shaqadii Guddoomiye ee Bankiga dhexe oo uu u magacaabay Xasan Shiikh Maxamuud kadib markii ay sheegtay inay jirto musuq maasuq baahsan.
Haddaba Yusur Abraar ayaa la sheegayaa inay kamid ah noqon doonto xubnaha wasiirada oo uu soo magacaabi doono Ra’isulwasaaraha cusub ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre.
Haddaba soo noqoshada Yusur ayaa muujineyso hal arrin ku saabsan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulalah Farmaajo iyo qaabka ay hadda ku socoto dowladiisa cusub.
Waxaan warbixintaan uga hadli doonaa waxyaabaha keenay inay Yusur kaga tanaasusho shaqadii Bankiga dhexe iyo waxa uu hadda ka dhigan yahay soo noqoshadeeda Muqdisho.
Sababihii keenay Inay Yusur ka tagto Bankiga dhexe
Waxaa dhacdey in Yusur rag madaxtooyda dowlada federaalka ah ay ugu hanjabeen in la dili doono hadii aysan lacagta oo dhan ku shubin account loo qoray ee first Rand bank orn Nedbank accounts.
laakiin Rag Mucaarad ahaa kana soo horjeeday siyaasada Xasan Sh. iyo Damu Jadiid ayaa waxeey Yusur Abraar kula taliyeen inaanay ogolaan dhaca xoolaha ummada Soomaaliyeed waxaase Gudoomiye Yusur aysan marna ka fikirin in gabadha xamar lagu dili karo waqti kasta. Waxaa ay markaa la xiiirtay safaardaha Mareykanka ee Nairobi iyo Dubai kadib markii ay u dhaarteen willasha aan wax u taliya la aqoon ee xasan sh Maxamuud uga shaqeeya Madaxtoyadiisa.
Maxay ka dhigan tahay soo noqoshadeeda:
Dadka falanqeeyo siyaasadda ayaa aaminsan in soo noqshada Yusur Abraar ay ka dhigan tahay in dowladda uu hoggaamiye Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laga dhadhasan karo inaysan diyaar u aheyn musuq maasuq waxayna midaas kamid aheyd ballan-qaadyadii uu sameeyey Farmaajo intii uu ku jiray loolankii doorashada.
Inta hadda muuqato ayaa tilmaameyso in dowladda Farmaajo ay ilaa hadda iska ilaalineyso waxyaabo lug ku yeelan karo musuq maasuq waxaana la filayaa in haddii Yusur lagu soo daro dowladda weliba loo dhiibo xagga amaanada Maaliyadda ay keeni karto inaysan dowladda ka dhex dhicin wax musuq maasuq ah.
Soo noqoshada Abraar waa astaan muujineyso inuu Farmaajo yahay madaxweyne ka dhabeyn doono ballanqaadyadii uu sameeyey ee ahaa inuu ka shaqeyn doono horumarka dalka sidoo kalana uu dowladiisa kala xisaabtami doono musuq maasuqa.
Waxaa laga war sugayaa sida ay noqon doonto dowladda Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Xasan Cal Kheyre markii ay xoogaa shaqeeyaan waxaana la ogaan doonaa haddii ay iska ilaaliyaan qaladaadkii keenay inay fashilmaan dowladihii hore.
Shan Qodob oo lagu sifeeyey Yusar Abraar is casilaadeedii kadib: